Antsafa · Septambra, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Antsafa · Septambra, 2018
Tantara mikasika ny Antsafa tamin'ny Septambra, 2018
Hiper-barrio21 Septambra 2018
Mediam-bahoaka13 Septambra 2018
Iray tamin'ireo tetikasa fampahalalam-baovaon'olon-tsotra dimy voalohany nahazo ny vatsy kely avy amin'ny Rising Voices tamin'ny volana Jolay ny Voces Bolivianas ('Feo Boliviana'). Nikarakara andiana atrikasa efatra isan-kerinandro tao amin'ny cybercafe iray ao El Alto, Bolivia ireo tetikasa fitaratra roa voalohany, tarihan'i Mario Duran, Eduardo Ávila, sy Hugo Miranda.
Mediam-bahoaka05 Septambra 2018
Fantaro ilay bilaogera Sara Abd Al-Maktari
Mediam-bahoaka03 Septambra 2018
Nanomboka nandray anjara tamin'ny atrikasa voalohany natolotry ny tetikasa tohanan'ny Rising Voices 'Fanohanana ireo Vehivavy Mpikatroka amin'ny Teknikan'ny Media' (EWMAT) any Yemen ilay bilaogera Sara Abd Al-Maktari. Nanolontena izy nanomboka tamin'izay tamin'ny fitarihana ny andiana atrikasa mba hampianarana ny vehivavy momba ny fampiasana ny fampitam-baovaon'olon-tsotra.
Mediam-bahoaka01 Septambra 2018
"Te hampahafantatra ny faritaniko aho" hoy ilay bilaogera Edgar Andres Yana Lisme nanamafy,